२०२८ मा सिरहाको महिसोथामा जन्मिनु भएका प्रमोद यादव यतिवला सर्वाधिक शक्तिशाली पार्टी एमालेको सिरहा जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ । हत्या गरिएका सिरहाका अत्यन्त लोकप्रीय नेता हेम नारायण यादवको औंला समाएर राजनितिक जीवन प्रारम्भ गरेका प्रमोद यादव अपेक्षकृत शान्त, धीर र सहिष्णु व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्छ । सिरहा सदरमुकाममा बसेर दैनिक जनताको काममा जुटिरहने नेता यादव यस क्षेत्रमा अत्यन्त लोकप्रीय हुनुहुन्छ । उहाँसंग मद्दत माग्न जाने कोही पनि उदास भएर फर्किनु पर्दैन । जनताको काम भने पछि रत्तीभर विलम्व नगरी उहाँ पोशाक पनि नफेरी कुद्नु हुन्छ । उहाँको लोकप्रीयताको यही प्रमुख कारण पनि हो । नेता हेम नारायणको हत्या भए पछि एमालेको विशाल पार्टी संरचना र ठुलो कार्यकर्ता पंक्तलिाई उहाँले नेतृत्व दिनुभयो । अहिले उहाँ सिरहाको क्षेत्र नंं ३ को ख प्रदेशवाट संयुक्त वाम गठबनधनवाट प्रदेश सभा सदस्य पदको लागि उम्मेदवार हुनुभएको छ । निर्वाचन प्रचार अभियानको वेला अनुकल्पका सम्पादक अर्जुन थपलियाले उहाँसंग गर्नुभएको कुराकानीको सार संक्षेप यहाँ प्रस्तुत छ ।
प्रश्न ः निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुभयो तर के छ त तपाईको जित्ने आधार ?
आसन्न निर्वाचनमा मेरो जित सुनिश्चित छ । मेरो मात्र होईन प्रतिनिधि सभाका लागि वाम गठबनधनका संयुक्त उम्मेदवार एमालेका केन्द्रीय सदस्य कमरेड लीलानाथ श्रेष्ठको जित पनि सुनिश्चत छ । सिरहाली जनताले यस पटक नेतृत्व ड्यौरहीवाट झिकेर सर्वसाधारण जनताको छोराछोरीको हातमा सुम्पिने पक्का छ । सिरहाका जनताले पञ्चायातकाल देखि नै सिरहा क्षेत्रका ड्यौरहीहरुलाई मत हाल्दै आए तर ड्यौरहीका अधिपतिहरुले जनतालाई बिकास कहिल्यै दिन सकेनन् । सधै जनताको मत लिएर आफ्नो दरवारको नै श्रीवृद्धि गरे । त्यसकारण सिरहाको अन्य वजारहरु आज शहर भईसके तर सवैभन्दा पुरानो शहर सदरमुकाम सिरहा उजाड देखिन्छ । सिरहा शहर श्रविहिन , कान्तिविहिन र खण्डहर बनदै गएको छ । सिरहा सदरमुकाम वरिपरीका तात्कालिन गाविसहरुलाई हेर्नुस् , असार लागेपछि भदौसम्म लगडी गदियानी जस्ता गाउँमा पुग्न सकिन्न । गोईत , मोरवैता र चन्द्र नारायण दरवार ( ड्यौरही ) लाई मत दिदा दिदा जनता आजित भए तर यस क्षेत्रको बिकासका लागि ड्यौरहीका मालिकहरुले सिन्को समेत भाँच्न सकेनन् । मूल कुरा यस पटक जनताले ड्यौरहीहरुलाई चोट दिने छन् र एमालेका सूर्य चिन्हमा मत हालेर सिरहाको बिकासका लागि नयाँ ढोका खोल्ने छन् । सिरहाली जनताले नेतृत्व परिवर्तनको मुड बनाएका छन् । स्थानीय चुनावमा पनि त्यही देखियो ।
संयुक्त वाम गठबनधनले जित्ने अन्य आधार पनि छन् । गत स्थनीय निर्वाचनमा हाम्रो मेयर मात्र १७० मतले पराजित हुनु पर्यो । जवकी उप मेयरमा हामीले नै जितेका छौं । यसको अर्थ सिरहामा एमाले एक्लै पनि कोही भन्दा कमजोर छैन । अहिले झन माओवादी र एमाले हामी एकै ठाउँमा छौ. । दुवै पार्टीको मत जोडदा हामी अन्य भन्दा १२ हात अगाडी पुग्छौ । फेरी वाम गठबनधन बनेपछि जनतामा अपार उत्साह थपिएको छ । एमालेमा प्रवेश गर्नै लहर नै चलेको छ । बुधौरामा सिंगो गाउँ नै एमालेमा प्रवेश गरेको छ भने लगडी गदियानीमा पूर्व शिक्षक , पूर्व गाविस अध्यक्ष , पूर्व गाविस सचिव लगायत सैकडौ मानिस एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । हाम्रो संगठित मत कहि कतै भडकिदैन । दुनियाँलाई थाहा छ एमाले र माओवादीको संगठन चट्टान जस्तै छ । त्यसमाथी हाम्रा लोकप्रीय नेता कमरेड लीलानाथ श्रेष्ठ यसै क्षेत्रवाट चुनावमा उभिनु भएको छ । उहाँको आगमनले पनि यस क्षेत्रका मतदाता हदैसम्म उत्साहित भएका छन् । त्यसकारण प्रदेश ख सिरहामा मेरो र क्षेत्र नंं ३ मा कमरेड लीलानाथ श्रेष्ठको जित सुनिश्चित छ ।
प्रश्न ः तपाईले जितेपछि के के बिकास गर्नुहुन्छ सिरहामा ?
बिकासको दृष्टिकोणले सिरहा अत्यन्त पछाडी छ । राजनैतिक चेतना उच्च छ । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलले सर्वाधिक मत ल्याएको जिल्ला हो सिरहा । यसर्थमा यहाँ राजनैतिक चेतना उच्च छ । तर राजनीतिक वागडोर सधै सामन्तहरुको हातमा रह्यो । त्यसकारण सिरहा बिकासमा पछाडी पर्यो । बिकासका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सिरहा सदरमुकाम राणाकालिन अवस्थाको शहरहरु जस्तै छ । म जन्मिदा सिरहा जस्तो थियो आजसम्म त्यस्तै छ । खासै तात्विक भिन्नता देखिदैन । त्यसकारण सिरहाको बिकासमा थप उर्जा , थप आर्थिक श्रोत , थप गतिशिलता र थप चेतनाको आवश्यकता छ । त्यसका लागि नेतृत्व अत्यन्त उर्जावान, तिक्ष्ण, ईमान्दार र शाक्तिशाली व्यक्तित्व चाहिन्छ ।
अर्को कुरा लरतरो प्रयाशले सिरहाको विकास संभव छैन । १० देखि २० वर्षको गुरु योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । एउटा शहरको लागि चाहिने भौतिक संरचना, संस्थानहरुको स्थापना , उद्योगको स्थापना ,पर्यटनको क्षेत्र शैक्ष्कि संस्थानहरुको स्थापना , जनताको दैनिक जीवनमा चाहिने सुख सुविधामा वृद्धि , सिरहालाई अद्योगतिमा लैजाने कारणहरुको निदान आदी सवै कुरा सोच्न आवशयक छ । एक दीर्घकालिन योजना बनाएर लाग्नु पर्ने हुन्छ । यसैपाली वसपिट्टा नजिक कमलाको बाँध टुटेको भए सिरहा सदरमुकाम वगरमा परिणत हुन्थ्यो तर बच्यो । खतरा अझै टरिसकेको छैन । यी यस्ता कारणले सिरहा अद्योगतिमा पुगेको हो । ड्यौरहीहरुको सामन्ति सोचले सिरहा फस्टाउन सकेन ।
शहरी बिकासको लागि त्यहाँको अर्थशास्त्र गतिशिल र चलायमान हुनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि तिव्र हुनुपर्छ । वित्तिय संस्थाहरु फस्टाउनु पर्छ । बाहिरका मानिसहरु सिरहामा आगमन हुनुपर्छ । जिल्ला अदालत सिरहामा तारिख लिन आउने वाहेक अन्य मानिस सिरहा आउनु पर्ने कुनै कारण छ ? छैन । त्यति कारणले शहरको बिकास संभव छैन । त्यस कारण शहरमा चौतर्फी बिकासको बाटो खोल्न जरुरी छ ।
हामीले जित्नासाथ हुलाकी राजमार्गलाई दुई वर्ष भित्र पुरा गर्ने गरी काम थाल्ने छौ । नेपाल सरकारलाई यो राजमार्ग बनाउन हदैसम्म दवाव दिने छौं । हुलाकी राजमार्ग निर्माण सकिएको भोलीपल्ट देखि नै सिरहाको मुहार फेरिन थाल्छ । सिरहाको बिकासको प्रस्थानविन्दु यही हो । सिरहा नगरपालिका भरी रहेका ग्रामिण सडकहरु सवैलाई कालोपत्रे गरिने छ । करीव २५० किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने ग्यारेण्टी गर्दछु । सदरमुकामभरी पानी जम्ने र भेल पस्ने समस्यावाट शहरलाई मुक्त गरिने छ । यहाँवाट घरेडी वेचेर अन्यत्र जाने होईन बाहिरका मानिस सिरहामा घडेरी किनेर बस्न आउने वातावरण तयार पारिने छ । कुनै एकल जातिको बाहुलयता र दादागिरी समाप्त पारी सहिष्णु र मेलमिलापयुक्त समाजमा सिरहालाई रुपान्तरित गरिने छ । यहाँ जातिय विविधतामा आधारित समाज बनाउने संकल्प गर्दछौं । सिरहामा टाउन प्लानिंग गरेर पक्की सडक, सडक वत्ती, नाला , ढल, व्यवस्थित वसपार्क, सार्वजनिक शौचालय , हरियाली वृद्धि, सिरहा अस्पतालमा सुविधा संपन्न ट्रमा सेन्टर , सुविधा संपन्न प्रसुति गृह आदीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने छ । जनता आवास मार्फत हरेक दलित परिवारलाई घर प्रदान गरिने छ । विद्युतविहिन घर रहने छैन । सिरहाको फुटवल टिमलाई पुनरजीवन दिईने छ । सिरहा क्यामपसको स्तरोननति र शैक्षिक व्यवस्थापन गरिने छ । पर्यटन बिकासका लागि ऐतिहासिक धरोहर सल्हेशसंग जोडिएका स्थानहरुलाई रमणीय बनाईने छ । सिरहामा प्राविधिक शिक्षाका लागि सरकारी शैक्षिक संस्थाको स्थापना गरिने छ । चोहर्वा सिरहा सडकलाई चार लेन बनाई भारतिय सिमासम्म विस्तार र माडर भन्सार नाकाको स्तरोन्नति गरिने छ । प्रत्येक १० विगहामा एक पावरड्रिल वोरिङ्ग दिई सिंचाई सुविधा उपलव्ध गराईने छ । यी त भए प्रमुख कार्यहरु । यस वाहेक पनि झिना मसिना थुप्रै बिकासका कार्यहरुलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।
प्रश्न ः मधेस र मधेसी जनताले एमाले माथि भरोसा गर्लान् त ?
मधेस मात्र होईन हिमाल र पहाड अर्थात सिंगो नेपाल र नेपालीको आशा र भरोसाको केन्द्र नै एमाले पार्टी भएको छ । झन वाम गठबन्धन बने पछि यो शक्ति प्रति नेपाली जनता र मधेस तथा मधेसी समेत विस्वस्त र आशामुखि भएका छन् । देशलाई आर्थिक समृद्धिमा पुरयाउने र जनतालाई सामाजिक न्याय दिने शासन वाम गठबन्धनले नै दिन सक्छ । २ र २ जोडदा ४ हुन्छ तर वाम गठबन्धन बने पछि २ र २ जोडिएर आठ हुन थालेको छ । ईनर्जी होईन सिनर्जी पैदा हुन थालेको छ । गाउँ गाउँमा जेष्ठ नागरिकहरुले हामीलाई स्वागत गरिरहेका छन् । वाम गठबन्धनको सरकार बन्छ र मासिक वृद्ध भत्ता ५ हजार थाप्ने उनीहरुको अभिलाषा छ । सामाजिक न्यायका लागि कमजोर वर्गहरु हामीतिर आशावादी भएर हेरिरहेका छन् । मधेसवादी दल भनाउँदाहरुलाई गाल वजौने कुछ न होई भन्दैछन् जनताले । जनतालाई ज्ञात छ बिकास गर्ने पार्टी वाम गठबनधन नै हो भनेर । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सिरहामा सर्वाधिक मत एमालेले नै ल्याएको हो । एमाले लगायत वाम गठबन्धनमाथी नै जनताको भरोसा छ ।
प्रश्न ः थप केही भन्नु छ ?
यस पटक सिरहाली जनतामा हाम्रो आग्रह छ की सूर्यमा मतदान गरी कमरेड लीलानाथ श्रेष्ठ र म प्रमोद यादवलाई अत्यधिक मत लयाएर जिताउनुस् । लीलानाथ श्रेष्ठ र म प्रमोद यादव मिलेर यस क्षेत्रको काया पलट हुने गरी बिकास गर्नेछौ ।